Booliska Talyaaniga oo qabtay tahriibiye Soomaaliyeed. - Wargeyska Faafiye
Home 2016 June 26 .Warka Booliska Talyaaniga oo qabtay tahriibiye Soomaaliyeed.
Booliska Talyaaniga oo qabtay tahriibiye Soomaaliyeed.
June 26, 2016 · by	Liban Farah ·
Roma-Saraakiisha Booliiska dalka Talyaaniga ayaa shaaciyay inay magaalada Roma ku xireen nin Soomaali ah, oo looga shakiyay inuu ka mid yahay shabakad dadka muhaajiriinta ah u tahriibisa dalalka Yurub.
Xeer ilaaliyaasha magaalada waqooyiga Talyaaniga ku taalla ee Brescia, ayaa codsaday in la xiro ninkan oo aan magaciisa la sheegin, isagoo loo heysto in uu warqado been abuur ah u sameeyey tahriibayaal.
Ninkan Soomaaliga ah ayaa la sheegayaa inuu warqado been-abuur ah u sameeyay laba qof oo u dhalatay waddanka Suuriya, kuwaasoo sanadkii hore loo xiray in ay xiriir la leeyihiin kooxda IS.
Dowladaha Talyaaniga iyo Masar ayaa dagaal kula jira kooxaha dadka tahriibiya, kuwaasoo ah sil-sillad isku xiran xarumo qarsoodi ahna ku leh gudaha magaalooyinka Soomaaliya iyo waddamada kale ee ay dadka ka dhoofiyaan.
Wadahadalka S Sudan oo lais mari la'yahay.
Gaari fariin goostay oo 3 caruur dilay.
Nin toogasho lagu dilay gudaha Muqdisho.